Crash Bandicoot? ရင်းနှီးသလို ခံစားရလား? ကုတ်တစ်ခုရွတ်ပြမယ် (←▲→←O →↓↓) အဲ့တာ ဘာခိုးတာလဲ? သိတဲ့လူ ဖြေကြည့်ပါ၊ ကျွန်တော်တို့ထဲမှာ Crash Fans တွေ ရှိလားသိချင်လို့ပါ။
စာပြန်နွေးရမယ်ဆိုရင်တော့ Crash Bandicoot ဒါမှမဟုတ် Crash Team Racing လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ မြေခွေးလမ်းလျှောက်နဲ့ မြေခွေးကားမောင်းဂိမ်းတွေကို ကျွန်တော်တို့တတွေ PlayStation 1 ခေတ်ကတည်းက ကောင်းကောင်း ကစားခဲ့တာ မှတ်မိမယ် ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ မြေခွေးကားမောင်းကို ပိုကြိုက်တယ်ဆိုမယ့် Developer/Publisher ကြီး Activision က Remaster ပြန်လုပ်တဲ့အခါ Graphics ၊ Gameplay ပိုင်းကအစ သေချာပြန်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
Smashing Blast from the Past ဆိုတဲ့အတိုင်း ဇာတ်လမ်းလည်းကောင်း ၊ ဇာတ်အိမ်လည်းကောင်းပြီး Presentation Score နဲ့ Difficulty ပိုင်းကိုပါ သေချာချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတွက် Crash Bandicoot N Sane Triology ဟာ မခက်၊ တခက်လေး ကစားလို့ ကောင်းတယ်။
Crash Bandicoot (Image Credit: GOCDKeys)
ဥာဏ်သုံးရတယ်၊ Crash Team Racing ကျတော့ Multi-player ဖြစ်သွားပေမယ့် Story-line ကစားချင်လည်း ရပါတယ်။ Arcade Racing ဖြစ်တဲ့အတွက် သူငယ်ချင်း ၂ ယောက် ကွန်ပျူတာ ၄ ယောက်နဲ့ပြိုင်ပြီး ? သေတ္တာထဲက လက်နက်တွေယူ၊ အကျင့်ပုတ်တာ မခံချင်ရင် အပေါ်က Code ကို Game Menu မှာ ဝင်ခိုးတာ မှတ်မိမယ် ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ပြောချင်တာကတော့ Crash Bandicoot စီးရီးတစ်ခုလုံး Mobile Game အဖြစ် မြင်ရပါတော့မယ်။ ထွက်ရှိမယ့်ရက် ဘာ၊ ညာ အသေချာ မသိရသေးတဲ့အတွက် စောင့်ရဖို့တော့ ရှိမှာပါ။
Photo: Kotaku Austrilia
လက်ရှိ ပေါက်ကြားထားတာ ပြောရရင် Crash Mobile ကို Candy Crash Developer “King” က ဖန်တီးသွားမယ်။ New Game Mode အနေနဲ့ Endless Run ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီး Exclusive အနေနဲ့ မြေခွေးလမ်းလျှောက် ၊ မြေခွေးကားမောင်း ၂ မျိုးပါဝင်နိုင်တယ်လို့ ပြောနေပါတယ်။
Storemaven ကတဆင့် Kotaku (Australia) က Crash Mobile ရဲ့ Gameplay Screenshot တချို့ ဝေမျှခဲ့ပြီး Storemaven ပြောဆိုချက်အရ အရင်ဂိမ်းတွေလိုပဲ ပြေးလမ်းတလျှောက် TNT ဗုံးသေတ္တာ၊ အတားဆီးတွေ ကျော်ရင်း ကျွန်တော်တို့က ပန်းသီးခေါ်တယ် (တကယ်က Wumpas) စုရင်း ကစားရမယ်။
Crash Mobile မှာလည်း Hidden Paths နဲ့ Secret Passages တွေ ပါဝင်လာဦးမှာဖြစ်ပြီး Challenges အသစ် Unlock လုပ်နိုင်မယ်။ Base Building အပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း အာကာသ စခန်းအထိ ကူးလူးပျံသန်းနိုင်မယ့် လွန်းပျံယာဥ်ကိုပါ တည်ဆောက်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Crash Mobile ဟာ Temple Run ၊ SubwaySurfer နဲ့ Alto စီးရီးတွေနောက် အောင်မြင်လာမယ့် ဂိမ်းလို့ တွေးမိပါတယ်။
အခုချိန်မှာလည်း Steam Store ပေါ်မှာ ရောင်းချထားတဲ့ Crash Bandicoot N Sane Triology ဟာလည်း အောင်မြင်မှုရခဲ့သလို Rating လည်း ကောင်းတဲ့အတွက် မိုဘိုင်းအထိ ခြေဆန့်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာတယ်လို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။